IHuawei Nova 5 ifumana isatifikethi se3C ngentlawulo ekhawulezileyo ye40 watts | I-Androidsis
I-Huawei Nova 5 ifezekisa isiqinisekiso se-3C nge-40-watt ekhawulezileyo
Lokugqibela P30 Pro IHuawei yeza nesisombululo sokutshaja esikhawulezayo esenziwe yinkampani. Kodwa obu buchwephesha bokutshaja ngokukhawuleza abuyi kubakho nje, njengoko bunokufumana indlela eya kuyo Nova 5 uthotho phakathi kuluhlu xa ukhutshwa.
Oku kubangwa kuba iimodeli ezimbalwa zeHuawei, ekukholelwa ukuba ziimodeli zeNova 5, zifumene i Isiqinisekiso se3C e China. Iimodeli zidweliswe ngamanani emodeli 'SEA-TL10' kunye 'SEA-AL10'.
Uluhlu lwase-China lwe-3C aluhlali lutyhila okuninzi, kodwa eyona nto ibalulekileyo esinokuyifumana kuyo yile Ubukho kwithaja ye-40 W ngaphakathi kwebhokisi yokungenaukuya. Itshaja inenombolo yecala efanayo naleyo ifunyenwe kwi-Huawei P30 Pro yokutshaja ibhloko.
Ngelixa amanani emodeli engaqinisekisi ngokwamagama eNova 5, ukubonakala kwemodeli yeHuawei kwiwebhusayithi yeKhomishini yezoQoqosho yase-Eurasian kunye nenombolo yemodeli efanayo 'SEA-LX1', edweliswe njenge 'Huawei nova 5 ″, inika ubungqina bokuba ngaba ezi mobiles. Kwakhona, uthotho lweNova alukahlaziywa kulo nyaka kwaye silindele ukukhutshwa okutsha kungekudala.
Isibini samatyala okhuselo kunye neenguqulelo zeNova 5 zisandula ukuvuza kwi-Intanethi, esisinika umbono woyilo. INova 5 yabetha i-EEC ngeNova 5i, eyabizwa ngegama 'SEA-LX1U'.
Isixhobo siya kuba noyilo olufana ne Imbeko ye-20 iLite, kodwa akuyi kubakho senzwa yeminwe emva. Endaweni yoko, iya kubandakanya inzwa yeminwe engaphantsi komboniso. Ke ngoko, iya kuba phambili ngakumbi phakathi kwinqanaba eliphakathi lenkxaso-mali yeHuawei. Nangona kunjalo, oku kuhlala kuqinisekisiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Huawei Nova 5 ifezekisa isiqinisekiso se-3C nge-40-watt ekhawulezileyo
Umphathi wakwaSony uthi icandelo lenkampani elihambahambayo liyinxalenye yeshishini